Fayraska Corona wuxuu sababayaa in Sigaar la cabo Caws badan. • Dawooyinka Inc.eu
Qiyaastii laba-meelood laba meel Dutch-ka oo si joogto ah u caba haramaha ayaa hadda caba sigaarka sababta oo ah dhibaatada coronavirus, sida lagu sheegay natiijooyinka horudhaca ah ee daraasad ay sameysay Machadka Trimbos ee Nederland. Waxay ku bixiyeen caajisnimo sababta ugu weyn ee korodhka qaddarka kala-goysyada maalinlaha ah, laakiin walwalka iyo cabashooyinka kale ee nafsaaniga ah ayaa sidoo kale badanaa la sheegaa.
Ku dhowaad nus ka mid ah kaqeybgalayaasha daraasadda ayaa u sheegay Machadka Cudurrada in ay sigaar cabbaan qiyaastii inta haragga ah ee ay sameeyeen ka hor intaan tallaabooyinka coronavirus la dhaqan gelin. Toban meelood meel waxay yiraahdeen waxay yareeyaan sigaarka ama waxay joojiyeen sigaar cabista. Kuwa caba sigaarka badan waxay cabaan celcelis ahaan 4,3 laabatooyinka maalintii, marka loo barbardhigo celcelis ahaan 3,6 kahor dhibaatada coronavirus.
Trimbos waxay sameyneysaa cilmi-baaristan si ay u muujiso sida isticmaaleyaasha xashiishadda ay uga jawaabaan tallaabooyinka fayraska corona. Sida laga soo xigtay machadka, ma ahan daraasad wakiil ah, laakiin si kastaba ha ahaatee waxay siineysaa calaamad wanaagsan oo ku saabsan saameynta tallaabooyinka coronavirus ee isticmaalka xashiishadda.
Ilaha waxaa ka mid ah NLTimes (EN), Telegraph (NL), Trimbos (NL)
cannabistaajFayras CoronacaafimaadkaNederlandcilmi baarisqabatinka
Howlgal cusub oo ka dhan ah xashiishadda Faransiiska, oo lagu ganaaxayo la dagaallanka isticmaalka xashiishadda dadweynaha ...
Waa maxay Cannabinol (CBN) maxaadse ugu isticmaashaa?
Cannabinol, ama CBN, waa xarun khafiif ah oo maskaxeed oo laga helo xashiishka, kaliya ...
Cilmi-baaris ku saabsan "ka-dhaafitaanka caarada" Tilburg weli lama dhammaysan: ajnabiyeyaashu waxay kaloo tagi karaan dukaamada kafeega bilowga 2019
Shisheeyayaashu wali way booqan karaan maqaayadaha qaxwada ee Tilburg wixii ka dambeeya 1 Janaayo. Iyadoo milkiilayaasha dukaanka kafeega ...